ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ မှာ ဘုရားဖူးလို့ ကုသိုလ်ပွားကြစေရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ မှာ ဘုရားဖူးလို့ ကုသိုလ်ပွားကြစေရာ
ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ မှာ ဘုရားဖူးလို့ ကုသိုလ်ပွားကြစေရာ
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on May 5, 2012 in Buddhism, Photography |9comments
၁ ။ အား လုံး သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ တို့ သ စ္စာ
လေး ပါး ကို သိ မြင် ကြ သော နေ့ 
၂ ။ ဂေါ တ မ ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဖွား မြင် သော နေ့
၃ ။ ဂေါ တ မ ဗုဒ္ဓ ဘု ရား ဖြစ် သော နေ့ 
၄ ။ ပ ရိ နိ ဗ္ဗာန် စံ တော် မူ သော နေ့ 
၅ ။ ဂေါ တ မ ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ သု မေ ဓါ ရ သေ့
ဖြစ် နှင့် နိ ယ တ ဗျာ ဒိတ်
ခံ ယူ သော နေ့ 
၆ ။ မ ဟာ ဗော ဓိ ပင် ပေါက် သော နေ့ 
( ဖွား ၊ မြင် ၊ ပွင့် ၊ စံ ၊ ဗျာ ၊ ဓိ ၊ ခံ မှတ် ရန် က
ဆုန် လ ပြည့် ကြုံ )
ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ ၀ယ် ရွာထဲက Aye.kk ရဲ့ ပို့စ်မှ မှတ်သားစရာ လေးများနဲ့ အတူ မေဒေးမှာ ရွာထဲကမိတ်ဆွေများနဲ့ အလှူခရီးထွက်တုန်းက ရိုက်လာတဲ့ ဘုရားပုံတော်တွေရယ်၊ မေ ၂ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မှာ ရွှေတိဂုံနဲ့ မဟာဝိဇယကို သွားဖူးတုန်းက မှတ်တမ်းတင်လာတဲ့ ပုံလေးတွေကို ရွာထဲမှာ ပြန်ဝေမျှလို့ ဖူးမျှော်ကုသိုလ် ယူတော်မူကြပါအုံး ခင်ဗျာ။
ပုံ-၁ . ပန်းတနော် က နဂါးရုံဘုရား
ပုံ-၂ . အစုကြီးခရီးမှာ ၀င်ဖူးခဲ့တဲ့ စေတီလေးတဆူ
ပုံ-၃ . နောက်တဆူ
ပုံ-၄ . ကျိုက်ထီးရီုးဘုရားပုံတူ
ပုံ-၅ . လေးဆူဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံ
ပုံ-၆ . မဟာဝိဇယ ဘုရား
ပုံ-၇ . နာဂစီဝရ ပဋ္ဋပဋိမာ ရုပ်ပွားတော် (မဟာဝိဇယဘုရား လှိုဏ်ဂူတော် အတွင်းမှာ စံပယ်နေသော)
ကိုရွာစားတို့ မိသားစုလည်းချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ဘုရားဒါယိကာ ရေ ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမယ့် ၊ သည်ကနေ့ အိမ်ကဘုရားမှာ ရှိခိုးရုံကလွဲလို့ ၊ အခြား ဘုရားစေတီများကို မရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။ ဘုရားဒါယိကာ ကောင်းမှုနဲ့ ဘုရားစုံလင် ဖူးမျှော်ရသဗျား ။
မနေ့က ဘီယာဆိုင်ပို့ပြီးတော့ ဒီကနေ့ ဘုရားဖူး ပို့ပေးတာပေါ့ဗျာ..၊
ပုံတော်တွေက ကြည်ညိုစရာကောင်းလှပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
ရွှေကြည်က လူတိုးရမှာကြောက်လို့ နေ့ကြီးရက်ကြီးတွေမှာ ဘုရားသွားခဲပါတယ်။
မိသားစုနဲ့ အတူပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ပါစေကြောင်း
ချစ်သောမိသားစုနဲ့ ဘဝမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ပါစေဗျာ။
ရွာစားကျော် ဘုရား စုံ တင်ပေးထားတာပဲ.. ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ.. မနေ့ကတော့ ရာသီဥတု သာယာတယ်။ နေမပူဘူး။ သူတော်ကောင်းတွေ ကုသိုလ်တွေ ပြုလို့ နေပြင်းပြင်း မပူဘူးထင်ပါရဲ့။
နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိ မြို့ နယ် ဖိုးစောင်တောင် ပေါ်တွင် တည်ရှိသော Mount Pleasant့ ဟိုတယ် ၀န်းကျင် ၌ ယနေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီ ၁၀ မိနစ်ခန့် က ရုတ်တရက် လေပြင်းများ တိုက်ခိုက်ကာ ကွမ်းသီးခြမ်း အရွယ်ရှိ မိုးသီးများ ကြွေကျခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
တေဘီဆရာ.. ကျုပ်တို့တော့ သူတော်ယုတ်စက်ကွင်းထဲ ရောက်သွားရော.. တေဘီ